व्यापारीको घरमा ज्यूनार गरेपछि प्रचण्डले किन लगाए ब्याक गिएर ? माधवले किन लगाए ब्रेक ? » aarthikplus
व्यापारीको घरमा ज्यूनार गरेपछि प्रचण्डले किन लगाए ब्याक गिएर ? माधवले किन लगाए ब्रेक ?
२०७७ चैत्र १३ गते, शुक्रबार १३:५२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेकपाको दर्ता बदर हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा गरेको फैसलाविरुद्ध शुक्रबार मुद्दा पुनरावलोकनमा जाने निर्णय अन्तिम चरण रोकिएको छ । प्रचण्डले एमालेको असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव नेपालसँग बिहीबार साँझ र शुक्रबार बिहान निवेदन दर्ताबारे व्यापारी टपेन्द्र तिम्सिना र चन्द्रलाल श्रेष्ठको घरमा छलफल गरेका थिए । ती छलफलपछि पुनरावलाेकन निवेदन केही दिन पर सरेकाे छ । ‘पार्टीले अन्तिममा आएर आज निवेदन दर्ता रोकेको छ ।
अर्को सातासम्म दर्ता हुन्छ,’ निवेदन मस्यौदामा संलग्न मुक्ति प्रधानले भने । माओवादी केन्द्रले सो फैसलाबिरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसारै मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मुद्दाको विपक्षी तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षको हैसियतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न लागेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निवेदनको मस्यौदा तयार पारेका हुन् ।
त्यसमा रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, रामनारायण बिडारी र मुक्ति प्रधानले अन्तिम रूप दिएका थिए । निवेदन दर्ताकै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले नेता नेपालबीच पछिल्ला बैठक भएका थिए । निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपासँगै नाम जुध्ने गरी एमाले–माओवादी केन्द्रको एकीकृत पार्टी दर्ता गरेपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
बीमा कम्पनीको आम्दानी अब यसरी घट्ने भयो निश्चित,घट्यो बीमा समितिको कमिसन
सिंगटी हाइड्रोको आईपीओ पर्‍यो ? कतै परि पो हाल्यो कि यसरी हेर्नुहोस् त
लाइसेन्स लिन यसरी बनाइयो सजिलो, जेठदेखि ट्रायलमा ७० अंक ल्याए पास,यी हुन् थपिएका नयाँ व्यवस्था
सिंगटी हाइड्रोको आइपीओ खुल्यो,कति कित्ता भर्दा हुन्छ उपयुक्त ?